७५ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको सिटिजन लाइफको जीवन बीमा कोष १५०% वृद्धि
मंसिर ३, काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालू आवकोे पहिलो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय वृद्धिसँगै जीवन बीमा कोष १५० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
गत आवको पहिलो त्रैमासमा जीवन बीमा कोष रू. ८० करोड ३८ लाख रहेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा रू. २ अर्ब ८२ लाख पुगेको छ । साथै कम्पनीले गत आवको पहिलो त्रैमासमा कुल बीमाशुल्क रू. ३३ करोड ९४ लाख संकलन गरेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा रू. ६२ करोड ८ लाख संकलन गरेको छ ।
गत आवको तुलनामा चालू आवमा बीमा शुल्क आर्जन ८३ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा जीवन बीमा कोषमा १५० प्रतिशतको वृद्धि गराउन सफल उक्त कम्पनीले जगेडा तथा कोषको आकार पनि रू. ४१ करोड ५१ लाखबाट ४२ प्रतिशतले बढाएर रू. ५९ करोड १० लाखको उचाइ छोएको छ । साथै कम्पनीले लगानी र बीमालेखको धितो तथा अन्य कर्जाबाट प्राप्त हुने आयमा ४७ प्रतिशतको वृद्धि गरी रू. १० करोड ९६ लाख पुर्‍याएको छ ।
जीवन बीमा व्यवसायमा लगानीको अवधिले कम्पनीको आयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकोले कम्पनीले दीर्घकालीन लगानी तथा कर्जा लाई प्राथमिकता दिई कुल लगानी तथा कर्जा रकम रू. ४ अर्व ५१ करोडमध्ये करीब ८८ दशमलव ३१ प्रतिशत रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दीर्घकालीन अवधिको ऋणपत्र तथा मुद्धती निक्षेपमा लगानी गर्न सफल भएको छ ।
यस अघि गरिएको दीर्घकालीन लगानीले भविष्यमा समेत उच्चदरमा प्रतिफल प्रदान गरी कम्पनीको स्थायित्वका लागि आधार स्तम्भ निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ ।
साथै, कम्पनीले ७५ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नयाँ जीवन बीमा कम्पनीमध्येकै धेरै आईपीओ ल्याउन लागेको हो । कम्पनीले हालसम्म नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छैन । धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएर स्वीकृति पाएपछि कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नेछ ।